ယူနိုက်တက်ကို သောမတ်စ်မူလာ ရောက်လာတော့မှာလား? | FOX Sports Myanmar
ဘွန်ဒစ်လီဂါ | အောကျတိုဘာ 17, 2019
ယူနိုက်တက်ကို သောမတ်စ်မူလာ ရောက်လာတော့မှာလား?
ဈေးကွက်အတွင်းမှာ တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးခေါ်ယူဖို့ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဇန်န၀ါရီကာလအတွင်းမှာ သူတို့ရဲ့ ပစ်မှတ်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဘိုင်ယန်တိုက်စစ်မှူးသောမတ်စ်မူလာကို ခေါ်ယူဖို့ ပြန်လည်ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မူလာဟာ ဘိုင်ယန်မှာ ပုံမှန်ကစားခွင့်မရရှိလို့ အသင်းကထွက်ခွာဖို့ ဆန္ဒရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်။
ဂျာမနီလက်ရွေးစင်ကစားသမားဟာ နည်းပြကိုဗက်လက်ထက်မှာ အရန်ကစားသမားအဖြစ်နဲ့သာ ရှိနေသူဖြစ်ပြီး ဒီရာသီမှာလည်း ဘွန်ဒက်လီဂါသွင်းဂိုးတစ်ဂိုးမှ မသွင်းယူနိုင်သေးပဲ ရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်။ မူလာကို လူးဝစ္စဗန်ဂါးလ်လက်ထက်မှာ ယူနိုက်တက်က ခေါ်ယူဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမယ့်လည်း မူလာအတွက် ဘိုင်ယန်မြူးနစ်က မြင့်မားတဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေးကို တောင်းဆိုခဲ့လို့ ပျက်ပြယ်ခဲ့ရပါတယ်။
လက်ရှိမှာ ယူနိုက်တက်က မူလာကို လျှို့ဝှက်ဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ Daily Mail က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ လူကာကူ၊ ဆန်းချက်ဇ်တို့ကို အသင်းကနေ ထွက်ခွာစေခဲ့ပေမယ့် တိုက်စစ်မှူးသစ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းခဲ့ခြင်းမရှိလို့ ရက်ရ်ှဖို့ဒ်နဲ့ မာရှယ်တို့ ဒဏ်ရာရရှိနေချိန်မှာ တိုက်စစ်ပိုင်းအခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအတွက် လာမယ့်ဇန်န၀ါရီဈေးကွက်မှာ မန်ဇူကစ်လို အတွေ့အကြုံရင့်တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးကို ခေါ်ယူမယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တိုက်စစ်မှူးဟောင်းဇလာတန်အီဘရာဟီမိုဗစ်ကိုလည်း ပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ သတင်းတွေထွက်နေသလို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သောမတ်မူလာနဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
စြေးကှကျအတှငျးမှာ တိုကျစဈမှူးတဈဦးချေါယူဖို့ ပွငျဆငျထားတဲ့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ဇနျနဝါရီကာလအတှငျးမှာ သူတို့ရဲ့ ပဈမှတျဟောငျးတဈဦးဖွဈတဲ့ ဘိုငျယနျတိုကျစဈမှူးသောမတျဈမူလာကို ချေါယူဖို့ ပွနျလညျရညျရှယျထားတယျလို့ သိရပါတယျ။ မူလာဟာ ဘိုငျယနျမှာ ပုံမှနျကစားခှငျ့မရရှိလို့ အသငျးကထှကျခှာဖို့ ဆန်ဒရှိနသေူဖွဈပါတယျ။
ဂြာမနီလကျရှေးစငျကစားသမားဟာ နညျးပွကိုဗကျလကျထကျမှာ အရနျကစားသမားအဖွဈနဲ့သာ ရှိနသေူဖွဈပွီး ဒီရာသီမှာလညျး ဘှနျဒကျလီဂါသှငျးဂိုးတဈဂိုးမှ မသှငျးယူနိုငျသေးပဲ ရှိနသေူဖွဈပါတယျ။ မူလာကို လူးဝစ်စဗနျဂါးလျလကျထကျမှာ ယူနိုကျတကျက ချေါယူဖို့ ကမျးလှမျးခဲ့ပမေယျ့လညျး မူလာအတှကျ ဘိုငျယနျမွူးနဈက မွငျ့မားတဲ့ ပွောငျးရှကွေ့ေးကို တောငျးဆိုခဲ့လို့ ပကျြပွယျခဲ့ရပါတယျ။
လကျရှိမှာ ယူနိုကျတကျက မူလာကို လြှို့ဝှကျဆကျသှယျမှုတှပွေုလုပျနတေယျလို့ Daily Mail က ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။ ယူနိုကျတကျအနနေဲ့ လူကာကူ၊ ဆနျးခကျြဇျတို့ကို အသငျးကနေ ထှကျခှာစခေဲ့ပမေယျ့ တိုကျစဈမှူးသဈပွနျလညျဖွညျ့တငျးခဲ့ခွငျးမရှိလို့ ရကျရျှဖို့ဒျနဲ့ မာရှယျတို့ ဒဏျရာရရှိနခြေိနျမှာ တိုကျစဈပိုငျးအခကျအခဲတှနေဲ့ ရငျဆိုငျနခေဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။
ဒီအတှကျ လာမယျ့ဇနျနဝါရီစြေးကှကျမှာ မနျဇူကဈလို အတှအေ့ကွုံရငျ့တိုကျစဈမှူးတဈဦးကို ချေါယူမယျလို့ သတငျးတှထှေကျနပေါတယျ။ ဒါ့အပွငျ တိုကျစဈမှူးဟောငျးဇလာတနျအီဘရာဟီမိုဗဈကိုလညျး ပွနျလညျချေါယူဖို့ သတငျးတှထှေကျနသေလို နောကျဆုံးအနနေဲ့ သောမတျမူလာနဲ့ သတငျးတှေ ထှကျပျေါလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Home Football Bundesliga ယူနိုက်တက်ကို သောမတ်စ်မူလာ ရောက်လာတော့မှာလား?